तिमी ‘भर्जिन’ हो भन्ने प्रश्नमा मोडल अञ्जली अधिकारीको यस्ताे जवाफ ! (भिडियोसहित) – List Khabar
Home / मनोरंजन / तिमी ‘भर्जिन’ हो भन्ने प्रश्नमा मोडल अञ्जली अधिकारीको यस्ताे जवाफ ! (भिडियोसहित)
तिमी ‘भर्जिन’ हो भन्ने प्रश्नमा मोडल अञ्जली अधिकारीको यस्ताे जवाफ ! (भिडियोसहित)
admin October 28, 2021 मनोरंजन Leaveacomment 199 Views
अमेरिकामा बस्ने युबक भनेपछी नेपाली सेलिब्रिटी हुरुक्कै, गायिकापछी नायिकाले पनि अमेरिका बस्ने युबकसंग बिहे गर्दै
मनोञ्जन दुनियाँका हसिला रसिला अन्र्तवार्ता लिने उत्सव रसाईलीसँगको कुराकानीमा उनले आफू कन्याकुमारी (भर्जिन) नरहेको खुलासा गरेकी हुन् ।
अविबाहित मोडल अञ्जली अधिकारीलाई उत्सव रसाईलीले आर यू भ र्जिन भनेर प्रश्न गर्छन् । उनले बडो शानका साथ नो भन्छिन् ।
अञ्जलीले नो भन्दा उत्सव रसाईली अचम्ममा परेजस्तो गर्छन्। त्यसपछि उसले फेरी प्रष्ट पार्न खोज्छिन् । अहिलेका केटीहरु १३, १४ बर्षमा महिनावारी भइसकेपछि कहाँ भ र्जिन बाँकी रहन्छन् र ? उनले भन्न खोजेको कुरा उत्सव रसाईलीले थप क्लियर गर्न सक्दैनन् कुरा यत्तिकैमा मोडिन्छ ।
दुबै जना हासोको फोहोरामा हराउछन् । अर्को अन्र्तवार्तामा उनले कुनैपनि चलचित्रमा तपाईलाई न्यू ड सिनको अफर आयो भने ? अञ्जलीले त्यहाँपनि आफूलाई चुकाएकी छिन् । उनले पहिले पैसा हेर्छु कति छ त्यसपछि ओके भन्दिन्छु ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा समेत त्यो क्लिप भाइरल छ । पैसा भए जेपनि गर्ने रहिछन् भनेर उनको तिव्र आलोचना गरिएको छ । सेलिब्रिटीहरु कहिलेकाहीँ अन्तरवार्तामा स–साना कुरामा चिप्लिँदा ट्रोलको शि कार हुनुपर्छ ।
जस्तो कि अहिलेकी हटकेक मोडल अञ्जली अधिकारी धेरै पटक अन्तरवार्तालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल भइरहेकी छिन् । एउटा यूट्यूव च्यानललाई दिएको अन्तरवार्तामा अञ्जलीलाई उनको ‘रिलेसनसिप स्टाटस’ बारे सोधिएको थियो । तर, जवाफमा अञ्जलीले ‘फेसबुक स्टाटस’को कुरा गर्न थालिन् ।
‘मेरो स्टाटसमा प्राय गीतहरु नै हुन्छन्, आफूले खेलेका भिडियोका क्लीप्सहरु पनि राख्छु,’ उनले दिएको यही जवाफको क्लीप फेसबुक ग्रुपहरुमा सेयर भइरहेको छ । र, अंग्रेजी नजानेको भनेर धेरैले उनलाई खिसी गरेका छन् ।
यसमा नायिका तथा निर्मात्री दीपशीखा खड्काले अञ्जलीको बचाउ गरेकी थिइन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरुमाथि आपत्ति जनाउँदै स्टाटस लेखेकी थिइन् । अंग्रेजी नेपालीको मातृभाषा नभएको उल्लेख गर्दै उनले लेखेकी छन्, ‘आफ्नो मातृभाषा नजानेको भए पो लाज, अरुका भाषा नजान्दा केको लाज ?’
उनले यूट्यूवरलाई पनि दनक दिएकी थिइन् । दिपशीखाले लेखेकी छन्, ‘एउटा यूट्यूवरले एउटा कलाकारको इन्टरभ्यू लिन्छ । अरे लाईभ त होइन नि यार । असुद्ध कुराहरु नराखे पनि हुन्छ नि । त्यसैलाई हाइलाइट गर्छन् । अरे अर्काको इज्जत फुकेर आफ्नो चुलो कि बाल्नु के ? किन ?’
त्यसो त ट्रोलको शि’कार हुने नेपाली सेलिब्रेटीमा अञ्जली मात्र एक हैनन् । बोल्दा जिभ्रो चिप्लेर ट्रोलको शि’कार हुनुको पीडा सायद नायिका प्रियंका कार्कीलाई जति कसलाई थाहा होला र? उनले केही वर्ष अगाडि एउटा अन्तरवार्तामा बोलेको संवाद अहिले पनि हाँसोको विषय बन्ने गरेको छ ।
भर्खरै अमेरिकाबाट फर्केको बेला प्रियंकाले एक यूट्यूव च्यानललाई अन्तरवार्ता दिएकी थिइन् । उनलाई सोधिएको थियो– अमेरिका तपाईंको कतिऔं पटक हो ?’ यो प्रश्नमा उनले उत्साहित हुँदै जवाफ दिएकी छिन्, ‘अमेरिका मेरो फस्र्ट टाइम हो । यूके यूएस त धेरै पटक पुगिसकेँ । तर पढाई सकेर नेपाल फर्किएपछि म पहिलोपटक अमेरिका आएकी हुँ ।’
धेरै वर्ष अमेरिका बसेकी प्रियंकाले यूएस र अमेरिका एकै हो भनेर नबुझेकी पक्कै होइनन् । तर, जिभ्रो चिप्लिनु उनको दुर्भाग्य भएको छ । उनै प्रियंकाले केही समयअघि अर्को एउटा अन्तरवार्तामा अझै ठूलो गल्ति गरेकी छन् । आफ्ना प्रेमी आयूष्मान देशराजसँगै दिएको अन्तरवार्तामा उनको मुखबाट अञ्जानमा छाडा शब्द निस्केको थियो ।
त्यसो त केही समय अगाडि नायिका रेखा थापाले अन्तरवार्तामा हँसाएकी थिइन् । अमेरिका जाँदा उनले एक अन्तरवार्तामा भनेकी थिइन्, ‘अमेरिकामा रहेका नेपालीहरु एकदमै होमलेस भएको मैले पाएँ ।’ खासमा उनले ‘होम सिक’ भन्न खोजेकी थिइन् । होमलेस भन्न पुगिन् ।
Previous कहिले आउन पाउँछन् नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलिया?
Next दिनको ३ वटा छोकडा खानुहोस्, १ हप्तामै मिल्नेछन् नपत्याउँदा फाइदा
विवाह सम्बन्धी यो अनौठो घटना पढेर टाईटल सँग सम्बन्धित भिडियो हेरौं.. कहिलेकाहीँ अनौठा घटना हुन्छन्, …